Shiinaha 92% alumina alumina dahaarka dhoobada birta warshadda si loo qiyaaso warshad sameynta iyo alaab-qeybiyeyaasha | YUNFENG
92% Beeninta Dhoobada Dhoobada Dhoobada Alumina ee Warshadda Si loo qiyaaso habaynta qaabeynta
Microcrystal tubbada wareega ee alumina ee iska caabisa * Waxaa la qaatay aagga arjiga: saliidda, macdanta, miiqyada birta, dhirta korantada iyo warshadaha kale ee qalabka gudbiya ama walxaha iska caabbinta ee dusha sare ee dareeraha maraya tuubo. * Qaado astaamaha sheyga: iska caabin abrasion wanaagsan; adkaanta mohsku waxay gaari kartaa 9.0 * Qaado aagga arjiga: Meelaha arjiga: Saliida, macdanta, mashiinada birta, dhirta korantada iyo warshadaha kale dusha sare ee qalabka ama qalabka ...
Microcrystal tuubada wareega ee alumina ee iska caabisa
* Qaado aagga arjiga: saliida, macdanta, mashiinada birta, dhirta korantada iyo warshadaha kale qalabka gudbinta qalabka ama waxyaabaha xirta-iska caabbinta dusha sare ee dareeraha maraya tuubo.
* La qaatay aaga arjiga: Aagagga arjiga:
Saliida, macdanta, makiinadaha birta, dhirta korantada iyo warshadaha kale dusha sare ee qalabka ama walxaha gudbinaya dareeraha maraya qalabka dhuumaha u adkaysta dhuumaha, saamaynta ugu weyn ayaa si wax ku ool ah loola dagaallamayaa saameynta saameynta qalabka derbiga la marsiiyey.
* Waxyaabaha alaabta:
Qalabaynta cadaadiska qalalan, heerkulka sare, dhagaxa rooga HR80-90, oo kaliya labaad dheeman.
Intaa waxaa dheer: Soo-saarka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo sawirrada macaamiisha
* Faa'iidooyinka:xirashada iska-caabbinta, u adkaysiga saamaynta, dhismaha ku habboon, iwm, waxqabadkeeda teori teeb ahaaneed waxay u dhigantaa 260 jeer oo bir bir ah, birta chrome, 170 jeer. Si wax ku ool ah u dheereyn kartaa nolosha adeegga ee xirashada qaybaha.
Dahaarka xirashada dhoobada waxaa loogu talagalay inay si aad ah ugu adkeysato xoqitaanka xitaa socodka walxaha sare iyo xawaaraha, ka hortagga wax soo-saarka. Waxay cadeysay inay qiimo leedahay gaar ahaan xirashada codsiyada macdanta iyo isku darka. Maaddad ahaan, dhoobada ayaa leh astaamo faa'iido u leh ka-hortagga daroogada oo dheereeya nolosha duugga iyo hagaajinta iska caabinta saameynta. Dahaarka dhoobada wuxuu kaloo yareeyaa buuqa iyo gariirka.
Codsiyada guud ee dahaarka dhoobada ayaa ah: Dahaarka Chute, Dahaarka Conveyor, Dahaarka kutlada Cyclone, Dahaarka Hopper, Dahaarka tuuboyinka, Xuubka Pulley, Dahaarka Qiiqa, Dahaarka barta kala wareejinta, Codsi kasta oo kale oo la xidho
Alumina dhoobada ayaa habeyn karta cabbirka dhoobada dhoobada gaarka ah, qaabka, iyo qaabeynta dahaarka dhoobada si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee dharka dhirtaada. Waxaan uga faa'iideysan karnaa xogta nidaamka saxda ah hawlgalladaada si aan u qaabeyno una soo saarno xalka dahaadhka oo buuxiya bartilmaameedyada wax soo saarkaaga.
Adeeg-cimri dheer - wadarta kharashyada guud
Codsiyada badan guryaha ugu fiican ee dahaadhka ayaa ah natiijada isku darka waxyaabaha ugu fiican ee qalabka kale iyo dhoobada.
Isku darida waxyaabo kala duwan waxay xaqiijineysaa nolol dheeri ah oo dheeri ah marka la barbar dhigo ilaalinta kale ee xirashada. Waxyaabaha dhoobada adag ee aan caadiga ahayn waxay bixiyaan iska caabin u gaar ah xirashada dharka, halka sifooyinka laastikada ah ee qalabka kale sida cinjirka ay si wax ku ool ah u soo dhiciyaan saameynta shoogga. Waxaan naqshadeyn karnaa oo sameyn karnaa dahaarka dharka iyadoo la isticmaalayo dhoobada, cinjirka, birta, polyurethane, iyo isku-darka qalabkaan.
Qalabka dhoobada dhoobada waxaa lagu soo saaray xarumaheena gaarka ah oo lagu dabaqayo barnaamijyo hubin tayo leh oo adag marxalad kasta oo cilmi baaris ah, horumarin ah, qaabeyn iyo wax soo saar ah. Tani waxay keeneysaa tayo sare, mid le'eg oo loogu talagalay sahayda oo idil. Qiyaasta saxda ah iyo dulqaadka dhow waxay hubinayaan in dahaarka dhoobadaadu ka jawaabeyso baahiyaha loo baahan yahay.
Hore: Hexagonal Ceramic Wear-Resistant Liner Hopper Xidho liner dhoobada Dhuxul Dhuxul
Xiga: Safka-dhoobada-dhoobada 92% Alumina dhoobada dhoobada dhirta
Alumina Cones Ceramic
Alumina Cylmic dhululubada Waayo, Steel tuuboyinka Dahaarka
Alumina dahaarka alumina steel aluminium tubbada
Alumina tuuboyinka dhoobada
Alumina Tube Ceramic
Ballaca Weelka Tubta Alumina Dhoobada
Xidho Tuubbada Alumina liner adkaysi u leh